“In Maamuus Ka Xayuubin Madaxtooyada Lagu Sameeyaa Waa waajib,Waayo Talladiiba Way Heehaabaysaa” | Ogaalnews
“In Maamuus Ka Xayuubin Madaxtooyada Lagu Sameeyaa Waa waajib,Waayo Talladiiba Way Heehaabaysaa”
November 1, 2015 | Published by: Khadar Jaamac Dirir (Jacayl)
“Dalka Waxa Ka Dhacay Inqilaab Dadban Oo Gudoomiye Muuse Biixi Sameeyay, Markaa Waa In Baarlamaanku Waajibkiisa Guto”
Hargeysa(Ogaal) Xildhibaan ka tirsan golaha wakiillada Somaliland, ayaa sheegay in guddoomiyaha Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, oo garab ka helaya dhinacyo kale uu faro galiyay hawlaha dawladda, isagoo tilmaamay inuu hanaan inqilaab u muuqda ula wareegay awoodda madaxtooyada. Dhanka kalena waxa isa soo taraya dhaqdhaqaaqyo dhan ka ah madaxtooyadda oo ku saabsan mooshin maamuus ka xayuubin ah oo xildhibaaano baarlamaanka ka tirsani wadaan.
Xildhibaan Jaamac Xasan Aadan, oo wakiillada ka tirsan, ayaa sheegay in astaamaha muujinaya in guddoomiyaha Kulmiye la wareegay awoodda madaxtooyada ay ka mid yihiin wefti Ethiopia ka yimi oo uu sheegay arrimo dhanka amniga ah inay u yimaadeen uu madaxtooyada kula kulmay, halkii xukumaddu kala kulmi lahayd buu yidhi. Sidoo kale wuxuu xusay in gudoomiyaha Kulmiye inuu kala shaandhaynayay dadka danaynayay inay buuxiyaan jagooyinkii wasiiraddu iska casileen.
Waxa uu ku dooday xildhibaanku in xukumadda haatan jirta ee ka dambaysay iscasilaaddii wasiiradu ay tahay mid inqilaab dadban ku timi. Isagoo arrimahaa ka hadlayana wuxuu yidhi;“Waxa dalka ka dhacay inqilaab dadban oo uu gudoomiyaha xisbiga Kulmiye sameeyay, isagoo isticmaalaya madaxweyne xigeenka iyo marwadda madaxweynaha, wuxuu inqilaabay xukuumaddi dadka reer somaliland ka dhaxaysay. Waxa bedelay xukuumad uu Muuse Biixi yeedhinaayo ilaa maamuladdii goboladda uu isagu gacanta ku dhigay. Meel kasta oo uu imika marayana waxa la leeyahay waxaad tahay madaxweyne, soo dhawoow madaxweyne. Madaxweynuhu wuxuu dhisay xukuumad aan dhinacna ahayn oo Somaliland ku wada sawirayd, ha xukun xumaataba, boobka hantida dalka haba samayso, laakiin kumay sawirayn xukuumaddii Muuse Biixi ee waxay ku sawirayd xukuumadda Siilaanyo. Laakiin maanta waxa dhacay wax aad iyo aad looga naxo, oo ah inqilaab dadban, islaanta iyo Muuse Biixi iyo madaxweyne xigeenka oo murashax ku xigeen uun isu arka ayaa maanta dalka ka talinaya. Markaa waxaan golayaasha, madax dhaqameedka iyo cid kasta oo dank a leh somaliland u sheegayaa in arrinkaa laga digtoonaado, laysagana yimaado waxna layskaga ogaado, siiba labada gole Baarlamaankuna waa inay waajibkooda gutaan. Xukuumad Somaliland maanta ma dhisna, doorashana ma gaadhsiin karto dalka, lagumana kalsoonaan karo, waa taa sababta aan u leeyahay waa in golayaasha baarlamaanku ka tashadaan iyagoo kaashanaya madax dhaqameedka iyo ciddii kale ee loo baahdaba.”
Dhawaaqa xildhibaankan ka sokow waxa la hadal hayaa inuu socdo qorshe mooshin maamuus ka xayuubin ah oo xildhibaanadda wakiiladu ay doonayaan inay badka soo dhigaan kadib markuu fadhiga goluhu furmo. Dhanka kale waxay warbaahinta qaar faafiyeen in madaxtooyadda lafteedu bilowday ollole ay iskaga baydhinayso sharka mooshinkaa oo ku soo beegmay xilli ay aad u dhaawacantay taageeraddii ay madaxtooyadu ka haysatay aqlabiyada golaha wakiiladda, isla markaana khilaafka xisbiga Kulmiye ee furka tuuray ee sababay is casilaaddii wasiiraddu uu horseeday inay wiiqanto taageeraddii ay madaxtooyadu ku lahayd golahaa. Xogguhu waxay intaa ku dareen in madaxtooyadu hawshaa u xilsaartay madaxweyne ku xigeenka, isla markaana uu Saylici gurigiisa ku shiriyay tiro lagu sheegay inay gaadhaysay ilaa labaataneeyo, halkaana lagaga wada hadlay sidii looga hor tegi lahaa mooshinkaa iyo sidii loo dooni lahaa aqlabiyada xildhibaanada maqan. “shalay goluhu muxaafid buu u badnaa, maantase aqlabiyaddiisu waa mucaarid, ficilka madaxtooyadda ayaana golaha wakiiladda mucaarad ka wada dhigay maanta. In maamuus ka xayuubin madaxtooyada lagu sameeyaa waa waajib,Waayo talladiiba way heehaabaysaa.” Sidaa waxa Ogaal u sheegay mid ka mid ah xildhibaanadda wakiiladda ooh ore u ahaa muxaafid xag jir ah, haatanna u muuqda mid geesta kale taagan. Mooshinka ayaa loo arkaa mid culays siyaasadeed lagu saarayo madaxtooyadda, isla markaana hadduu suuragalo noqon doonna fashil kale oo hogaaminta Siilaanyo ka dhigta, madaxweynihii u horeeyay ee goluhu ku guulaysto inuu maamuuska ka xayuubiyo, iyadoo hore Madaxweyne Cigaal ugaga badbaaday hal cod maamuus ka xayuubin uu golaha wakiiladdu ku oogay. Dhanka kale haday ka suuragasho dhinaca wakiiladda waxaan hawl yarayn inay ka gudubto dhinaca guurtida.